Thousand Islands Travels - အမေရိကားခရီးစဉ် ၁၅ည ၁၆ရက် - Myanmar Travel Agent
အမေရိကားခရီးစဉ် ၁၅ည ၁၆ရက်
CI 7916 G 10APR RGNTPE HK11 1050 1615/E *5 | S Y CABIN
CI4G 10APR TPESFO HK11 2340 2000/E *5 | S Y CABIN
CI7G 24APR LAXTPE HK11 0105 0600/E *5 | S Y CABIN
CI 7915 G 25APR TPERGN HK11 0700 0955/E *6 | S Y CABIN
Day 1 : ရန်ကုန် မှ ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့ သို့ ( ထိုင်ဝမ် တစ်ဆင့်ဖြင့် )
Yangon မှ China Airlinesလေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပြီးTaipeiမှတဆင့် California ဒေသ၏လူနေအထူထပ်ဆုံးသောမြို့ကြီးဖြစ်သည့်SanFranciscoသို့ရောက်ရှိပါမည်။လေဆိပ်တွင်လာရောက်ကြိုဆိုသောဒေသခံဧည့်လမ်းညွှန်မှဦးဆောင်ကာကားဖြင့်မြို့တွင်းခေါ်ဆောင်ပြီးဟိုတယ်တွင် check-in ၀င်၍အေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day2: San Francisco (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညနေစာ)
မနက်ပိုင်းတွင် San Francisco ပင်လယ်အော်ရှိကမ္ဘာကျော် Golden Gate တံတား၊Fisherman’s Wharf တစ်လျှောက်များစွာသောပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်တန်းလမ်းလျှောက်ရင်းလည်ပါတ်ပါမည်။နေ့လည်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် Lombard street မှRussian hill အတိုင်းဆင်းလာပြီး China Town ကိုလည်ပါတ်မည်။Twin peak မှ San Francisco မြို့၏အလှကိုအပေါ်စီးမှကြည့်ရှုခံစားမည်။ပနားမားပစိဖိတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲခင်းကျင်းပြသထားသော(PanamaPacificInternationalExposition
1915ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ထားသည့်Palace of Fine Artကိုလည်ပတ်ပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဟိုတယ်တွင်အေးချမ်းစွာ၊အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day3: San Francisco - New York (နံနက်စာ၊- ၊ညနေစာ)
San Franciscoမုအမေရိကား၏နှစ်သက်ဖွယ်မြို့တော်New York City သို့ထွက်ခွာပြီးအရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတမ်းတစ်လျှောက်လည်ပတ်လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွက်ခန့်အပ်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်လေဆိပ်တွင်တွေ့ဆုံပြီး hotel သို့ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတကယ်။Optional Tour: New York Night Tour
Day 4: New York (နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ၊ ညနေစာ)
America ရဲ့အကြီးဆုံးမြိုတော် New York City ကိုစတင်လည်ပတ်ပါမည်။အထင်ကရနေရာများဖြစ်ကြသောSt.Patricks’s Cathedral၊New York Stock Exchange ( NYSE ) တို့ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးWall Street တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ခေတ္တနားပါမည်။ယခင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုဌာန (Former World Trade Center) တည်ရှိခဲ့ရာGround Zero သို့လည်းသွားရောက်လေ့လာပြီးနေ့လည်ပိုင်းတွင်စိတ်ကြိုက် Shopping ထွက်ရန်အားလပ်ချိန်ပေးမည်။
Day 5: New York ( နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညနေစာ)
ယနေ.တွင် Empire State Building Observation Deck*, United Nations Headquarters, Rockefeller Center*၊ Times Square အစရှိသောနေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာပါမည်။Fifth Avenue တွင်လမ်းလျှောက်ရင်းဈေးဝယ်မည်။ Manhattan Harbor Cruise* ဖြင့်Libertyကျောက်ရုပ်ကြီးဆီသို့သွားရောက်၍မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပါမည်။
ထိုပြင် Hudson River တွင်တည်ရှိသောThe Intrepid Air Space Museum* သို့လည်းသွားရောက်လေ့လာပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဟိုတယ်တွင်အေးချမ်းစွာ၊အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day6: New York / Philadelphia / Washington DC (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညနေစာ)
မနက်ပိုင်းတွင်Pennsylvaniaဒေသသို့သွားရောက်ပြီးBenjaminfranklin’s၏သင်္ချိုင်းဂူရှိရာမြို့တော်ဟောင်းPhiladelphiaကိုလေ့လာလည်ပါတ်ပါမည်။မြို့တော်ဟောင်း၏အဆောက်အဦးများ (the Old Capital Building) နှင့်လွတ်လပ်ရေးခေါင်းလောင်း၏ကွန်းခိုရာအသစ် (the new home for Liberty Bell)၊လွပ်လပ်ရေးခန်းမIndepenednce Hall ( the historic site of the signing of the Declaration of
independece)စသောအထင်ကရနေရာများသို့သွားရောက်လေ့လာပါမည်။နေ့လည်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် Washington D. C မြို့သို့ထွက်ခွာပါမည်။လမ်းတွင်အချိန်ရပါကoutletတွင်ဈေးဝယ်ပါမည်။ Washington D. C သို့ရောက်ရှိပြီးညစာသုံးဆောင်၍ဟိုတယ်တွင်အေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 7: Washington DC. (နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညနေစာ)
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်အိမ်ဖြူတော် (White House) နှင့်the capital building၊အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းများ၏အောက်မေ့ဖွယ်နေရာများ (Jefferson Memorial, Lincoln Memorial, Roosevelt Memorial)သို့သွားရောက်လည်ပါတ်ပါမည်။
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ရန်ဝါရှင်တန်အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင် (Washington monument) တွင်ခေတ္တရပ်နားမည်။VietnamVeterans Memorial, Korean Veterans Memorial, Natural History Museumသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနေ့လည်စားကို Air and Space Museum ၌စီစဉ်ထားပါသည်။နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးပါကသဘာဝသမိုင်းပြတိုက် (Natural History museum) နှင့်Jefferson memorial တို့ကိုသွားရောက်လေ့လာပြီးရေကန်အလှကိုခံစားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပါမည်။
Day 8: Washington - Niagara Falls (နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညနေစာ)
အနောက်ဘက်သို့ဦးတည်၍ Harrisburg မြို့ကိုဖြတ်သန်းရင်းNiagaraရေတံခွန်သို့ထွက်ခွာပါမည်။လမ်းတွင် *Corning Glassစင်တာနှင့်ပြတိုက်ရှိနှစ်ပေါင်း၃၀၀၀ကျော်သက်တမ်းရှိသောဖန်ထည်အနုပညာလက်ရာများနှင့်အတူ Innovation Centre တွင်လည်းဖန်ထည်ပစ္စည်းများကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘ၀တွင်မည်သို့အရေးပါအရာရောက်သည်ကိုလေ့လာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ညနေပိုင်းတွင် Niagara ရေတံခွန်သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးရေတံခွန်၏ညဘက်အလှကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။လမ်းခရီးရှိစားသောက်ဆိုင်တွင်ညစာသုံးဆောင်ပါမည်။
Day 9: Niagara Falls - Las Vegas (နံနက်စာ ၊- ၊ ညနေစာ)
Niagara ရေတံခွန်ရှိGoatIslandတလျောက်လမ်းလျောက်ရင်း၁၇၆ပေအမြင့်မှဖြာကျနေသောရေတံခွန်အလှကိုခံစားကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ (Optional Tour: *Maid of the mist boat ကိုစီးရင်းဖြာဆင်းလာသောထုနှင့်ထည်နှင့် Niagara ရေတံခွန်အလှနှင့်ထစ်ချုန်းသောရေစီးသံကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြုံတွေ့ခံစားနိုင်ပါသည်။)ထို့နောက်ကမ္ဘာကျော်လောင်းကစားမြို့တော်Las Vegasသို့ညပိုင်းလေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။မှတ်ချက်။ ။ *Maid of the mist ခရီးစဉ်ကိုရာသီဥတုအပေါ်မူတည်၍စီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလမှဧပြီလအတွင်းတွင်ခရီးစဉ်ရှိရန်မသေချာပေ။
Day 10: Las Vegas - West. Grand Canyon (Skywalk) (နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညနေစာ)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ကြပြီးနောက်ကားဖြင့်ကြာချိန်၂နာရီလောက်သွားရသောကမ္ဘာအံ့ဖွယ် (၇) ခုမှတစ်ခုဖြစ်သောGrand Canyonသို့လည်ပတ်ကြမည်။ (Optional Tour :ကော်လိုရာဒိုမြစ်မှပေ၄၀၀၀အထက်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဒေါ်လာသိန်း၃၀၀တန်မိုးပျံတံတား(SkyWalk) ကိုလည်ပါတ်မည်။၄င်းတံတား၏အလေးချိန်မှာခရီးသည်အပြည့်နှင့်ဘိုရင်း 747 လေယာဉ်၏အလေးချိန်နှင့်ညီမျှသည်။) Grand Canyon တောင်ကြားသည်လူအများကခန့်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုကြီးမားပြီးထင်ထားသည်ထက်လည်းပို၍လှပသည်။လက်မှတ်ရနိုင်လျှင် Grand Canyon တောင်ကြားနှင့်ကော်လိုရာဒိုမြစ်၏အလှကိုဟယ်လီကော်ပတာစီး၍လည်းကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည်။နေ့လည်စာကိုလမ်းတွင်သုံးဆောင်ပြီးLasVegasသို့ပြန်ရာလမ်းတွင်အချိန်ရပါကကိုလိုရာဒိုမြစ်၏BlackCanyonတွင်တည်ရှိပြီး၊အရီဇိုးနားနှင့်နီဗာဒါးပြည်နယ်နှစ်ခုကြားတွင်တည်ရှိသောLasVegasမြို့အတွက်အဓိကရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ပေးသည့်Hooverဆည်သို့ဝင်ရောက်လည်ပတ်မည်။တနေ့တာပြီးဆုံး၍ညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်၌အေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 11: Las Vegas (နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညနေစာ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ဖြင့်)
ယနေ့တွင်Las Vegas ၏အလှနှင့်လူမှုဘ၀များကိုခံစားနိုင်ရန်အားလပ်ချိန်ပေးမည်။လမ်းလျှောက်၍Mirage, treasure Island, Bellagioနှင့်Paris စသောနာမည်ကျော်ဟိုတယ်ကြီးများ၏အလှကိုငေးမောကြည့်ရှုမည်။သို့တည်းမဟုတ်မိမိနေထိုင်ရာဟိုတယ်တွင်ရေကူးရင်းအပန်းဖြေမည်။
(Optional tour: ညပိုင်းတွင်Las Vegas ၏ ညပိုင်းဖျော်ဖြေရေး တွင် အကောင်းဆုံးနှင့် နာမည်အကြီးဆုံး Las Vegas show ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)သို့မဟုတ် မိမိစိတ်ကြိုက် night tour များfamous jubilee show များကြည့်ရူခံစားနိင်ပါသည်။
Day 12း Las Vegas uLos Angeles (နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညနေစာ)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Las Vegas မှ၅နာရီခန့်ကားမောင်းသွားရသောLos Angeles မြို့သို့ထွက်ခွာကြမည်။လမ်းတွင်ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး brand မျိုးစုံကိုဈေးသက်သက်သာသာဖြင့်စိတ်ကြိုက်ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်ရန်Lenwood factory outlet mall၌ခေတ္တရပ်နားပါမည်။နေ့လည်စာကိုလမ်းခရီးတွင်သုံးဆောင်ပြီးLosAngelesသို့ညနေပိုင်းတွင်ရောက်ရှိမည်။ဟိုတယ်တွင် check-in ၀င်၍ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်အေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 13းUniversal Studios / (နံနက်စာ ၊ ……… ၊ ညစာ)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီင်္းနောက် LA မြို့လယ်ကိုဖြတ်သန်းရင်း(ကားဖြင့်၄၅မိနစ်ခန့်သွားရသော)ကမ္ဘာကျော်Universal Sutdioနှင့်Hollywood သို့တနေကုန်သွားရောက်လေ့လာမည်။ယနေ့နေ့လည်စာကိုမိမိအစီအစဉ်ဖြင့်သုံးဆောင်ပါမည်။ကြီးကျယ်ခန်းနားလှသောအံ့သြောဖွယ်ရာရိုက်ကွင်းပြုလုပ်ချက်များကိုသွားရောက်လေ့လာပါမည်။
ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရိုက်ကူးလေ့ရှိသည်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ဥပမာမျက်စိရှေ့၃ပေအကွာတွင်ပင်အမြင့်၃၀ပေ၊အလေးချိန်၃၀၀၀၀ပေါင်ရှိသောကမ္ဘာကျော်ကင်းကောင် (King Kong ) ရုပ်ရှင်မှကင်းကောင်ကြီးကိုအနီးကပ်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ Cowboys စတန့်ရှိူး၊ Jaws ရုပ်ရှင်မှငမန်းကြီးများကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်ကျော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့သော Water World နှင့် Jurassic Park ရုပ်ရှင်ကြီးများကHollywoodဟုမည်သို့အသက်သွင်းခဲ့သည်ကိုလေ့လာခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ဟိုတယ်တွင်အေးချမ်းစွာ၊အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 14. Los Angeles (နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညနေစာ)
ဟိုတယ်နံနက်ပိုင်းအားလပ်ချိန်ပေးထားပြီး၁၁နာရီတွင်ဟိုတယ်မှ check-out လုပ်မည်။ယနေ့တွင် LA မြို့လယ်ရှိထင်ရှားသောNBA basketball teams of Laker home court - Staples Center ၊“L.A Time Square” ၊ L.A. Live Music Center နှင့် China Town ၊ Kodak theatre နှင့် Hollywood Boulevard, ရှိChinese theatre သို့လည်ပတ်မည်။Hollywood Boulevard တွင်ဟောလီးဝုဒ်ငွေကြယ်ပွင့်တို့နှင့်တွဲ၍ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်Beverly hills Rodeo Drive မှာဈေးဝယ်ကြမည်။နာမည်ကျော်brand names products များစွာရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်သည်။နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ညလေယာဉ်ဖြင့်ရန်ကုန်သို.ပြန်ရန်လေဆိပ်သို့ပို.ဆောင်းပေးပါမည်။
Day 15 : Los Angeles Q Taipei
Day 16 : Taipei Q Arrival Home Town
တိုင်ပေသို့နံနက်၆နာရီ၀၀တွင်ရောက်ရှိပြီးမြန်မာပြည်သို့၇နာရီတွင်ဆက်လက်ပြန်သန်းပါမည်။မြန်မာပြည်သို့နံနက် 9နာရီ 5တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
တစ်ခန်းထဲတစ်ဦးထဲနေလျှင် ၁၁၀၀ဒေါ်လာ ထပ်စောင်းပေးရပါမည်။
ခရီးစဉ်ကာလ = ၂၀၁၆ ဧပြီ ၁၀ မှ၂၆ ရက်နေ့ထိ
ခရီးစဉ်စဆုံးအဆင်ပြေမှုရှိစေရန်မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်စကားပြောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (Tour Leader) လိုက်ပါစီစဉ်ပေးမှု၊
ဟိုတယ်များတွင် Mini-bar၊အခပေးရုပ်သံ (Pay TV) နှင့်တယ်လီဖုန်းအသုံးပြူကုန်ကျစရိတ်များ၊
အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်များ၊ (ဥပမာ - သောက်ရေသန့်ဗူး၊အချိုရည်၊အဖျော်ယမကာခများ၊ဟိုတယ်တွင်အ၀တ်လျော်ခများစသဖြင့်)
Head Office : No.5 , Sayarsan Garden ,Sayarsan Road , Corner of the Passport office ,Bahan Township , Yangon.
Tel: 01 544633 , 09 977 921 700 , 09 977 921 701 , 09 977 921 702 , 09 250 577 551 , 09 250 577 535 , 09 250 577 552
Fax : +95 1 544633
Website : http://www.thousandislandstravel.com
Viber : 09 250 577 551, 09 250 577 552
Wechat : 09 250 577 551